Umshini ophakamisa abavelisi kunye nabaxhasi | China Umshini ophakamisa izixhobo
Umshini ophakamisa umoyayenye imveliso yethu intengiso ibalulekileyo equka ilifti galss ophakamisa, ipleyiti ezincamathelayo ophakamisa kunye nabanye emoyeni ophakamisa njalo njalo. Izixhobo zamkela ulawulo lwenkqubo ezimbini, elinye iqela lokusebenza kwenkqubo yokusebenza, kunye neqela elinye lilindile. Yamkela impompo yokuthambisa yaseMelika i-THOMAS DC, uphawu lwase-Italiya iMETALROTA ivili elinzima lokuqhuba, iSwitzerland BUCHER isikhululo sempompo yesanti kunye nebhetri engenasondlo kuphela. Ngexesha lokusetyenziswa, ukuhamba ngombane, ukuphakanyiswa kombane kunye nokutsalwa kombane kunokufezekiswa ngaphandle komthombo womoya wangaphandle okanye umbane. , Ujikelezo lwencwadi oluyi-360 degrees, flip i-degrees ezingama-90 kunye neminye imisebenzi.
Umshini wethu ophakamisa iglasi ophakamileyo usetyenziselwa ukufakela nokuphatha iglasi, kodwa ngokungafaniyo nabanye abavelisi, sinokufunxa izinto ezahlukeneyo ngokutshintsha iikomityi zokutsala. Ukuba iikomityi zokutsala isiponji zithathelwe indawo, zinokufunxa iinkuni, isamente kunye neepleyiti zentsimbi. .
Umnyango weglasi wangaphakathi uxhotyiswe ngetroli yekomityi yokufunxa, ukufunxa umbane kunye nokwehla, ukuphakamisa ngesandla kunye nentshukumo, ukulungele kunye nokugcina umsebenzi.
Indebe yeglasi yokutsala iqhutywa yibhetri kwaye ayifuni ukufikelela kwikhebula, okusombulula ingxaki yokuphazamiseka kwamandla kwindawo yokwakha. Ifanelekile ngakumbi kufakelo lweglasi yodonga oluphezulu kwaye inokulungiswa ngokobungakanani
I-DXGL-HD yohlobo lweglasi yokutsala indebe isetyenziselwa ukufakela nokuphatha iipleyiti zeglasi. Inomzimba okhaphukhaphu kwaye iqhuba kakuhle kwiindawo ezimxinwa zokusebenza. Kukho uluhlu olukhulu lokukhetha umthwalo phakathi kweemodeli ezahlukeneyo, ezinokuthi zihlangabezane neemfuno zabathengi ngokuchanekileyo.
Ewe kunjalo, ukujikeleza ngesandla kunye neflip yesandla kunokuxhotyiswa ngokujikeleza kombane okanye iflip. Le irobhothi ikomityi yokutsala inamandla kunye nokuphakamisa okuzinzileyo. Ukuxhotyiswa ngeJapan PANASONIC yedijithali yokubonisa isitshixo sokutshintsha koxinzelelo kunye nebhetri yebhetri, enokujonga ngokucacileyo ukusebenza ngokukhuselekileyo kwezixhobo. Inkqubo yembuyekezo yoxinzelelo lwe-vacuum eyakhelweyo iqinisekisa ukuba yonke inkqubo ye-vacuum igcinwa ngexabiso loxinzelelo olukhuselekileyo rhoqo ngexesha lokuphathwa kweglasi. Emva kokungaphumeleli kombane ngengozi, umsebenzi wokubamba uxinzelelo unokwandisa ixesha lokuqhubekeka kwaye ulisebenzise ngokukhuselekileyo. Uyilo oluhlengahlengiswayo lwamkelwe. Inokudityaniswa ngeendlela ezahlukeneyo ngokweemfuno, ukutshintsha indawo yeekomityi zokutsala kunye nekomityi nganye yokutsala ixhotywe ngevalve yolawulo eyahlukileyo, enokuncancisa iintlobo ezahlukeneyo kunye nobukhulu beglasi.